Waamicha dhaabbileen siyaasaan olitti wantoota haal-duree ta'an… - BBC News Afaan Oromoo
Waamicha dhaabbileen siyaasaan olitti wantoota haal-duree ta'an…
22 Caamsaa 2018
Dilbata darbe Ministira Muummee Dr. Abiy Ahimadiifi Pirezedaantiin Mootummaa Naanno Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa dabalatee gaaffii namoota Qeellam Wallaggaafi jiraatota naannoorraa dhiyaate yeroo deebisanitti dhimmoota hedduu kaasanii turan.
Gaaffiin misoomaa naannoo sanatti ka'u kan naannoo Oromiyaa bakka biroo keessatti ka'uun walfakkaachuu ibsanii, dhimmi naannoo sana adda taasisa jedhan, rakkoo nageenyaa kaasanii jiraatota waliin dubbataniru.
Dubbiin ijoo maree kanarrati ka'an keessaa dhimmi nageenyaa ijoo dubbii gochuun kan dubbatan Obbo Lammaan, kanaaf sababiifi furmaanni maal ta'uu akka qabu dubbataniiru.
Gaaffii misoomaa deebisuudhaaf, nagaadhaan waliin taa'anii tasgabbiidhaan mariyachuun dhimmi angafaa ta'uu ibsanii, kanarratti qaamni hunduu qalbiidhaan akka yaaduu qabus gaafataniiru.
Keessumaa sababii gaaffileen misoomaa naannoo Dambi Doolloo deebii kan argachuu dhabaniif, rakkoo nageenyaa naannoo sanatti yeroo baayyee mullatudha, jedhan. "Amma qabsoo abalu, abbaan abaluu gaggeessu kan jedhu dhiisnee, karaan waggaa shantama, dhibba ykn dhibba lama irra deemame sun sirriimoo sirrii miti jedhamee irra deebiyamee ilaalamuu qaba," jedhu Pirezedaantichi.
Bu'aan qabsoo hanga arr'aa argame kun konkolaataa tabbaa ba'aa jirudha
Siyaasa Oromoon gara tokkotti fiduun akka isaanirra jiraatu ibsuun , gara tokkotti fiduudhaafis tokko lamaan odiit gochuun barbaachisaadha. "Bu'aan qabsoo hanga arr'aa argame kun konkolaataa tabbaa ba'aa jirudha. Of eegannoon jiraate malee duubatti deebiyuu mala. Ammayyu gamaafi gamana dhaabannee jirra," jechuun waldhaggeeffachuufi tokkommaan hojjechuun fala ta'uu dhaaman.
Walitti dhufnee waliin dubbannee karaa dimokiraatawaa ta'een furuu qabna jechuun: "Tokko kilaashii qabatee bosona keessa osoo dhaabatuu inni kaan ammoo waajira osoo jiruu kun hin ta'u".
Yaada Pirezedaantiin dubbatan keessaa 'Tokko kilaashii qabatee bosona keessa osoo dhaabatuu inni kaan ammoo waajira osoo jiruu kun hin ta'u' jedhu maal akeeka?
Yuunvarsiitii Landanitti Qorannoo Dhimmoota Eeshiyaafi Afirkaarraa kan ta'an Ittaanaa Habtee (PhD) dubbii Obbo Lammaa kana yaada erga sanaa booda Dura Ta'aan Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Dr. Nagarii Leencoo dubbaterraa akka hubatanitti, "waa'ee kilaashii kan isaan kaasan Adda Bilisummaa Oromoo (ABO)tiin waan jedhan fakkaatu".
Akka Dr. Ittaanaatti, naannoo sanatti rakkoo nageenyaa hojjetoota caasaa mootummaarra irrra deddeebiyee mullatuuf jedhanii kaasan jechuun ni danda'ama. "Kan irra deddeebiyanii dubbataniiru. Yaaddoo sanarraan kan ka'een haariidhaan dubbataa turan".
Gaaffii misoomaa tokko tokko namoonni kaasanillee, osoo rakkinni kun jiruu attamitti deebii itti kennina kan Obbo Lammaan jedhan jedhu Dr. Itaanaan, waa'ee ABO waliin walqabatee ka'ullee, "yaaddoo inni qabu kan Obbo Lammaan dubbatan 'Abbaa Torbee' jechuudhaan kan beekamu namoonni caasaa mootummaa keessa hojjetan namoota dallansiisaniiru jedhaman irra deddeebiyanii du'uudha, akka naaf galutti," jedhan.
Haal-dureen dhimma labsii shorokeesuumaadha…
Mormiito jiran hunda waliin hojjechuuf akka fedha qaban waamicha dhiyeessaa turan kun akkamiin hojiitti jijjiiramuu danda'a, kan jedhuuf Dr. Ittaanaan, "Kun baayyee ifaadha. Maaliif yoo jedhame, gareen akka ABOfi dhaabbileen siyaasaa tokko tokko 'shorokkeessotadha' jedhamanii galmaa'aniiru.
Kanaaf jedhan Dr. Ittaanaan, haal dureen inni guddaan labsii kana kaasuudha. Osoo labsiin sun hin ka'iin waa'ee dhaabbilee sanaa haasa'uu waan dandeenyu natti hin fakkaatu, jechuun ibsu.
Waa'ee Oromoo tokkummeessuu gareen Obbo Lammaa erga dubbachuutti ka'anii waggaa lama ga'uudhaf jira kan jedhan Dr. Ittaanaan, "Tokkummaan Obbo Lammaanfaa jedhan, ooggansa Dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo (DHDUO) jalatti hiriiraa gaaffii jedhu qaba malee dirqama waa'ee tokkummaa Oromoo miti."
"Garuu namoota biyya alaa jiran biyyatti galchuudhaaf kan irra deddeebiyanii dubbatanirratti murannoon qaban guddaadha. Kun ergaa guddaa qaba akka waan gaarii ta'e tokkotti nan fudhadha," jedhan.
Gaaffilee Afaan Oromoofi dhimmi Finfinnee deebisan waan of arkaa qaban hin fakkaatu…
Akka Dr. Ittaanaan jedhutti, tokkummaa jedhame fiduudhaaf gaaffii namoonni waa'ee Afaan Oromoo afaan hojii mootumma Federaalaa gochuu, faayidaa addaa Finfinneefi kan biroo ka'an yeroo deebisan, waan qophaa'an hin fakkaatan.
Kanaaf, Gaaffii kana deebisuurra nuuf obsaa kan jedhudha kan isaan dubbatan. Gaaffiin uummata Oromo bakka bu'an osoo dhiyaatanii jiranii, gaaffii kanaaf deebii qabatamaa maaliif akka dubbachuu hin dandeenye rakkoodha jedhu. "Waa'ee Finfinnee ilaalchisee qophii nuti qamnu kana kana jedhanii ifa hin goone. Isayyu gara uummataatti as deebisanii nuti qopheessinee jennaan uummati nurratti morme jedhu."
Waa'ee Afaan Oromoo afaan hojii Federaalaa gochuu ilaalchisee qophiin isaan bira tokkollee waan jiru hin fakkaatu. Kanaaf, waa'ee tokkummaa DHDUO'n dubbachaa jiru kun akkaataa qabannaa ammaa kanaan wan milkaa'u natti hin fakkaatu, jdha Dr. Ittaanaan.
Akka yaada Dr. Ittaanaatti gareen Obbo Lammaa akka yeroo jalqabaa gaaffii uummataa sirriidha, gaaffiin keessan gaaffii keenya jedhanii fudhatan yeroo sanaa miti.
Kanaaf, akka Dr. Ittaanaan jedhanitti waamicha dhaabbileen siyaasaa jiran maraaf waamicha gochuun olitti haaldureewwan akka seera farra shorokkeessummaafi Labsii Yeroo Muddamaa jiran dhimmi ilaalamuu qaban.
Kaayyoo aanga'oonni ol aanaa mootummoota Federaalaafi naannoo Oromiyaa Godina Wallaggaa itti daawwataniif dubbatanii Dr. Nagariinis, gaaffiin misoomaa uummanni gaafatan caalaatti hojjetamuudhaaf yoo na geenyi jiraatedha jedhu. "Nageenyammoo namootuma naannooti ofiin eeggata," jedhu.
Gaaffileen jajjaboo uummanni kaasan…
Waggoottan digdaman darban keessa garri Lixaa keessatuu Qeellam Wallaggaa dagatamanii turan waan ta'eef gaaffiin misoomaa jiraachuu ibsuun Dr. Nagariin gaaffileen biroo jajjaboo akka Labsii Yeroo Muddamaa akka ka'u uummanni gaafachuu dubbatu. Qaamonni nageenyaa mootummaa gara garaa wan achitti argamaniif magaalaan Dambi Doolloo dirree waraanaa fakkaatti, namoonnis gadi ba'uu waan sodaataniif akka qaamni nageenyaa kun gara buufata isaaniitti deebiyaniif uummanni gaafachuullee Dr. Nagariin ni dubbatu.
Dhaabbileen seera amma jiru jalatti hin danda'mu jechuudhaan karaa hidhannoon socho'an akka ABO kaasuun, waamicha yeroo ammaa taasifamaa jiru kanaaf osoo seerri farra shorokeessummaafi Labsiin Yeroo Muddamaa jiruu akka hin danda'amne uummanni osoo sirraa'ee gaaffii jedhu ummanni Qeellam kaasuus yaadatu Dr. Nagariin.
Yoo obsaan nu eeggattan murtoo gurguddoo murteessaa jirra …
Ministirri Muumee Dr. Abiyyi Ahmadiifi Pirezedaanti Lammaa Magarsaas gaaffiiwwan seeraa shorokkessummaafi Labsii Yeroo Muddaamaa dabalatee kan ummatarraa dhiyaataniif, yoo obsaan nu eeggattan murtoo gurguddoo murteessaa jirra jechuun abdachiisuu isaanii heeraniiru Dr. Nagariin.
Qaamni Oromoodhaaf nan qabsaa'a jedhu kamiyyu bosona keessa osoo hin taane, uummata keessa galanii uummata waliin qabsaa'uu akka qaban karaa bananii agrsiisuu aanga'oota kanaa himan Dr. Nagariin.
'Kan haalaan hin beekne, yoo itti himaniyyu hin beektu'…
"Akka anaaf galetti 'kan haalaan hin beekne, yoo itti himaniyyu hin beektu' jedha Oromoon," jedhan Dr. Nagariin mammaaksaan yeroo dubbii tolchan.
Kanaaf, waamichi amma dhiyaataa jiru qaamni Oromoodhaaf qabsaa'aa jiru kamiyyu bosona keessa osoo hin taane Oromoo keessa dhufanii akka qabanidha, jedhan.
ABO'n Paarlaamaa Mootummaa Federaalaan akka dhaaba shorokeessaatti ramadamee ture. "Maqaa ABO jechuunuu akka yakkaatti ilaalama ture. Amma garuu dubbii ifa goonee walitti himuudhaaf, alattis, karaarrattism bosona keessattis kan du'u Oromoo waan ta'eef, kun hafuu akka qabudha. Kanaaf, osoo wal hin tuffatiin, wl hin jibbiin walitti dhufanii akka waliin hojjetan," ergaan sirrii darbuu himaniiru Dr. Nagariin.
Ijaarsa daandii baaburaa Awaash-Waldiyaa holqawwan 10 qaxxaamuru
26 Amajjii 2021
Waa'ee ija uummataa duraa dhabamuu MM Abiy maal beekna?
Finfinneetti kondomiiniyeemiin kumni 21 ol seeraan ala qabaman argaman
'Daa'imman ganna 14 gadii maqaa 'ABO-Shaneen' Gaambeellaatti hidhaman haa hiikaman'
25 Amajjii 2021
'Haalli Weellisaa Ibraahim keessa jiru agarsiiftuu gadadoo aartistoota Oromooti'
24 Amajjii 2021
'Itoophiyaa waliin lola hin feenu, lafa keenya taakkuu tokko hin kenninu'
21 Amajjii 2021
'Abbaan Bariisaa' Piroofesar Maahdii Hamiid boqotan
23 Amajjii 2021
Baayidan dhorkaa viizaa biyyoota Musliima hedduu qaban irra ture kaasan
'Daangaa seenanii akka qubatan, darbees kan keenya akka jedhan wanti haasa'ame hin jiru'
Shamarreen sirna waadaa galuu Baayidan irratti walaloo dhiyeessite eenyu?
Akkatti suurri Fesbuukiirratti gadhiifame seenaa mana barumsaa tokko jijjiire
Yeroo dhuma kan haaromfame: 27 Fuulbaana 2020
IQ maali? Beekumsiifi dandeettiin hubannoo namaa kanaan madaalamaa?
Yeroo dhuma kan haaromfame: 2 Fuulbaana 2020
'Sosochiin halluu keelloo' tibbana marsaalee hawaasaarratti argaa jirru maali?
Aadaa Oromoo yeroo namni du'u itti hinboo'amne beektuu?
Yeroo dhuma kan haaromfame: 25 Onkololeessa 2020
Sudaan Kibbaa sa'aatiishee duubatti deebisuuf murteessuun miira akkamii uume?
Seenaa Haji Adam Saaddoo iccitii liqimsuun gamatti
Yeroo dhuma kan haaromfame: 26 Waxabajjii 2020